केपी ओलीलाई बधाई दिँदै बाबुरामले भने अब सद्बुद्धि प्राप्त होस्… — newsparda.com
चितवनमा मंगलबार सम्पन्न दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पुनः एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बधाई दिएका छन्।
अध्यक्ष ओलीलगायत नवनिर्वाचित एमाले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यले शपथ खाइरहेका बेला डा। भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिएका हुन्। सँगसँगै उनले विगतका गलत विचार र कामबाट पाठ सिक्न नवनिर्वाचित एमाले अध्यक्ष एवं कमिटीलाई नै सुझाव पनि दिएका छन्।
‘नेकपा एमाले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उहाँको टिमलाई हार्दिक बधाई’, डा. भट्टराईले मंगलबार राति ट्विट गरेका छन्, ‘विगतका गलत विचार र कामबाट पाठ सिकेर बहुदलीय लोकतन्त्रमा जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न सद्बुद्धि प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना!’
अहंकारी र घमन्डी नेता हुँदैनः केपी ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घमन्डी र अहंकारी नेता नहुने बताएका छन् ।एमालेको १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा विजयी भएका ओलीले शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै नेताहरू जनताको सेवक भएको बताए । उनले सबै नेतालाई सभ्य र सरल हुन आग्रह गरेका छन् ।
जनताको सेवक अत्यन्तै शालीन हुनुपर्छु, उनले भने । उनले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई अध्ययनशील हुन अनुरोध गर्दै एमालेबाट अरू पार्टीले संस्कार सिक्नुपर्ने बताए । यसका साथै आगामी दिनमा पार्टीलाई थप सशक्त बनाएर लैजाने ओलीले बताएका छन् ।
विना काम सौराहाको ठण्डीमा झुलाइयो – दुर्गा प्रसाईं
कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा विचार,सिद्धान्त र कार्ययोजना तथा मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिइएपछि के के न नयाँ देख्न पाइन्छ भन्दै बसाइँ सर्नेलाई कस्तो लाग्ला ?
युवा पुस्ता स्वयंले ले सिक्न पाउला ? हुन तः ती पक्षमा ध्यान दिनको लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौटदेखि नै विधि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर आफ्ना भएपछि जस्तालाई पनि टिप्दाको परिणाम अहिले एमाले महाधिवेशन सौराहामा देखिएको छ ।
एकातिर नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल पार्टीभित्र विचार र पध्दतिको वकालत गरिरहेका छन् । हिजो बिहानदेखि शुरु हुने भनिएको बन्द सत्र अनेक सरसल्लाह गर्दागर्दै अपरान्ह ४ बजेमात्र थालिएको थियो ।
साँझ गरमागरम बहस र आलोचना भएपछि आज बिहान १० बजेसम्मलाई बन्द सत्र स्थगित गरिएको छ ।
एकथरि प्रतिनिधिलाई भने बन्द सत्र किन लम्बियो,नेताहरुबीच किन वादप्रतिवाद भइरहेको छ, विवादको चुरो के हो भन्नेबारे कौडी थाहा छैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट पात्रको रुपमा झापाबाट गोदावरी र चितवन दुबैतिर प्रतिनिधि मनोनीत र मार्सी उपनामले चर्चित दुर्गा प्रसाईले सौराहामा भइरहेको पार्टीको बन्द सत्रवारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् ।
आफू यस्तो कार्यमा अहिलेसम्म संलग्न नभएको भन्दै प्रसाइँले थपेका छन्, ‘बन्द के हो,सत्र के हो मलाई थाहा छैन ।
दुई दिनदेखि सबैले भात खाने र घाँटीमा कार्ड झुण्डाउने बाहेक केही गरेको छैन ।’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यहाँ केही काम भएको छैन ।
अहिलेसम्म केही भएको छैन । सहमति गर्नु थियो भने यसरी भेला गर्नु हुँदैन थियो । सबैभन्दा राम्रो पक्ष चुनाव हो । चुनाव गरेर नेतृत्व छान्नु पर्छ ।’